တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမှ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ Macrame လေးကို လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ချပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေ –7Day Daily News
လူလေးလှသလို စိတ်ထားလေးလည်း သိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး သူမရဲ့ ပရိသတ်မရှိလောက်အောင်ကို အောင်မြင်ပြီး လူချစ်လူခင်ပေါများသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်း ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ လက်မှုအနုပညာပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်နေတဲ့
ချစ်သုဝေက ဒီကနေ့မှာလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမှ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ Macrame လေးကို လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ ချပြလာခဲ့ပါတယ်။ “လွတ်လပ်ရေးနေ့… ပြည်ထောင်စုနေ့… ဒီတခါ “Our Land” ဖန်တီးမှုလေးဟာ Trezaအတွက်တော့ reference တစ်ခုမှယူစရာမရှိပါပဲ ဖြစ်ချင်စိတ်ကို ရအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ “macrame”
“🎼🎼တို့ပြည်..တို့မြေ..များလူခပ်သိမ်းငြိမ်းချမ်းစေဖို့ ခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေ🎶🎶”…. တကယ်ပဲ ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ကာကွယ်ပေးနေရပြီ။ ဒီတော့ “Our Land” macrame လေးကလည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်တွေအတွက် မြေပြင်ကို တိုက်ရိုက်စီးဆင်းသွားမှာပါ။ ” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သုဝေကတော့ သူမကိုယ်တိုင်ထိုးထားတဲ့ macrame လေးကိုရောင်းချပြီး ရံပုံငွေရှာဖွေခဲ့ရာ ပထမအကြိမ် သိန်း (၆၀) ကျော်၊ ဒုတိယအကြိမ် သိန်း (၁၇၀) ကျော်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုတတိယအကြိမ်မှာ ရံပုံငွေတွေ ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်နော်။
လူေလးလွသလို စိတ္ထားေလးလည္း သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့တဲ့ အဆိုေတာ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်စ္သုေဝကေတာ့ တစ္နိုင္ငံလုံး သူမရဲ႕ ပရိသတ္မရွိေလာက္ေအာင္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီး လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာလည္း ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားတဲ့ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းေလးေတြနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ေနတဲ့
ခ်စ္သုေဝက ဒီကေန႕မွာလည္း တစ္ကမာၻလုံးမွာမွ တစ္ခုတည္းရွိတဲ့ Macrame ေလးကို လြတ္လပ္ေရးေန႕၊ ျပည္ေထာင္စုေန႕မွာ ခ်ျပလာခဲ့ပါတယ္။ “လြတ္လပ္ေရးေန႕… ျပည္ေထာင္စုေန႕… ဒီတခါ “Our Land” ဖန္တီးမႈေလးဟာ Trezaအတြက္ေတာ့ reference တစ္ခုမွယူစရာမရွိပါပဲ ျဖစ္ခ်င္စိတ္ကို ရေအာင္ဖန္တီးထားတဲ့ “macrame”
“🎼🎼တို႔ျပည္..တို႔ေျမ..မ်ားလူခပ္သိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔ ခြင့္တူညီမွ်ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ေျမ🎶🎶”…. တကယ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုကို အသက္ေပးလို႔ကာကြယ္ေပးေနရၿပီ။ ဒီေတာ့ “Our Land” macrame ေလးကလည္း တန္ဖိုးရွိတဲ့အသက္ေတြအတြက္ ေျမျပင္ကို တိုက္ရိုက္စီးဆင္းသြားမွာပါ။ ” ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္သုေဝကေတာ့ သူမကိုယ္တိုင္ထိုးထားတဲ့ macrame ေလးကိုေရာင္းခ်ၿပီး ရံပုံေငြရွာေဖြခဲ့ရာ ပထမအႀကိမ္ သိန္း (၆၀) ေက်ာ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ သိန္း (၁၇၀) ေက်ာ္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုတတိယအႀကိမ္မွာ ရံပုံေငြေတြ ဘယ္ေလာက္ရမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရပါဦးမယ္ေနာ္။